Tababare Jurgen Klopp oo niyad jab ku riday jamaahiirta kooxda Liverpool – Gool FM
(Liverpool) 26 Nof 2018. Tababaraha kooxda Liverpool Jürgen Klopp ayaan qorsheeneynin inuu ka kaluumeysto suuqa soo aadan ee furmi doono bisha Janaayo ee soo aadan.
Wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in tababare Jürgen Klopp uu ku qanacsan yahay kooxda uu haatan ku heysto garoonka Anfield.
Jürgen Klopp ayaan dooneynin inuu u dhaqaaqo saxiixyada ciyaartoy cusub suuqa janaayo, ilaa iyo hadii ay dhacaan dhaawacyo dhanka ciyaartoyda kooxda Liverpool ah.
Wargeyska reer England ayaa wuxuu dhinaca kale shaaca ka qaaday in go’aanka tababare Jürgen Klopp ay layaab iyo niyad jab ku noqotay jamaahiirta kooxda Liverpool, kuwaasoo sugayay saxiixa kubad sameeye cusub ee buuxin kara booska Philippe Coutinho oo kaga biiray kooxda Barcelona.
Kooxda reer England ee Liverpool ayaa ku fashilantay suuqyadii lasoo dhaafay inay sameyso saxiixa kubad sameeyaha kooxda reer France Lyon ee Nabil Fekir, kaasoo ay sugayeen jamaahiirta Reds.
Qaar ka mid ah wargeysyada Ingariiska ah ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola uusan sidoo kale dooneynin inuu galo suuqa furmi doono bisha janaayo, inkastoo ay ka dhaawacan yihiin xidigaha muhiimka ah ee Kevin De Bruyne iyo Benjamin Mendy.
HORDHAC: Juventus v Valencia